ကွယ်လွန်သူဖြစ်လို့ ဖိတ်စာရော ၊ အကယ်ဒမီရော အပေးမခံရတဲ့ အကယ်ဒမီ ကိုသော်ဇင်(ဥပါဒါန်) – XB Media Myanmar
ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ မကြာခင်နာရီပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတော့မယ့် (၂၀၁၈) ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီးဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကို ကိုင်လှုပ်တော့မှာပါ ။ နှစ်တိုင်း ရင်နာစရာတွေဖြစ်တတ်တဲ့ အကယ်ဒမီဟာ ဒီနှစ်မှာလည်းပွဲမကျင်းပရသေးခင်မှာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်နေတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားရဲ့ တည်းဖြတ်သူ နှင့် မိသားစုဝင်တို့ကို ပွဲတက်ခွင့်မပေးသလို အကယ်ဒမီလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားမထားဘူးဆိုတဲ့ သတင်းပါ။
တည်းဖြတ်နယ်ပယ်မှာ အကယ်ဒမီတစ်ဆုပိုင်ဆိုင်ပြီးဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီသော်ဇင်ဟာ အကယ်ဒမီဆန်ကာတင်ဥပါဒါန်ရုပ်ရှင်ကို တည်းဖြတ်ပြီး မကြာခင်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ ။ လတ်တလောဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်ပေမယ့် ကိုသော်ဇင့်အတွက် ဖိတ်စာလည်းရောက်မလာသလို ဇနီးဖြစ်သူအတွက်လည်း ပွဲတက်ခွင့်ဖိတ်စာေ ရာက်မလာခဲ့ပါဘူး ။
အဆိုပါကိစ္စအပြင် လူသေဖြစ်လို့ အကယ်ဒမီမပေးဘူးဆိုတဲ့ တည်းဖြတ်မှု အကဲဖြတ်လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းဖြေဆိုမှုကို ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ရွှေရုပ် ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ”မောင်ရေ. မောင် တည်းဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဥပါဒန် ဇာတ်ကား ဇကာတင် ပါပေမယ့်လဲ? ????” ဆိုပြီး ကိုသော်ဇင့် ရဲ့ အကောင့်ကို Tag တွဲပြီးရင်နာနာရေး သားထားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ၊ ဒါရိုက်တာ မင်းညီ က”ကိုသော်ဇင်ရေ..ခင်ဗျားမိန်းမ..အကယ်ဒမီပွဲတက်ချင်ပေမယ့်….သေပြီးတဲ့သူမို့
ဆုမပေးသလို.ဖိတ်စာလဲမရဘူး..လို့..တည်းဖြတ်လူကြီးတဦးကိုဖုန်းဆက်မေးတော့ပြောတယ်တဲ့.။ကျွန်တော်လဲစိတ်မကောင်းရုံပဲတတ်နိူင်တယ်…ခင်ဗျားကလည်းဘာလို့အကယ်ဒမီပွဲမတိုင်ခင် ထွက်သွားရတာလဲဗျာ…။ ခင်ဗျားမိန်မ..သနားပါတယ်။သူတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာတယ်…” လို့ရေးသားထားပါတယ်။အနုပညာတကယ်ကောင်းရင် ကွယ်လွန်ခဲ့သူတွေကိုတောင် အကယ်ဒမီပေးတဲ့ ထုံးစံတွေရှိခဲ့တာကြောင့် အခုလိုဖြစ်ပွားရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမှတ်ချက်လေးတွေ ပြောပြခဲ့ပါဦး။